IHLABATHI LETAROT: INTSINGISELO, INGCACISO KUNYE NAKUNYE OKUNINZI
Ihlabathi ye tarot, ngomnye wama-78 amakhadi e-tarotUkuba unomdla wokwazi intsingiselo kunye neempawu zayo, ndiyakumema ukuba ufunde eli nqaku ukuze wazi indlela yokutolika kakuhle xa ufunda.
Fumanisa intsingiselo yehlabathi
1 Ihlabathi leTarot
1.1 Inkcazo yemizobo yetshathi
2 Limela ntoni ilizwe le-tarot?
2.1 Intsingiselo yayo
2.2 Ihlabathi limi nkqo
2.3 Umhlaba ujonge phantsi
3 Ngaba uyazi ukuba yintoni
Ihlabathi lelinye lamakhadi angama-78 esinokuwafumana kwidesika yetarot xa kufundwa, ikwabizwa ngokuba yi-Major Arcana yokugqibela.
Iyahambelana nenombolo 21 phakathi Omkhulu uArcana; Imvelaphi yehlabathi le-tarot njengaleyo yamanye amakhadi, omabini amakhulu kunye neMinor Arcana, abuyela kwinkulungwane yeshumi BC.
Ekuqaleni abaphandi abaninzi bafumanisa ukuba le yayiyimvelaphi yayo, nangona kunjalo, kwinkulungwane yamashumi amabini, kwaqinisekiswa ukuba babelungile ngohambo olwenzeka eMarseille.
Kolu phando bafumanise iileta ezingama-78 ezinemizobo yeempawu kunye neenkcukacha zento eyayiyipeyinti yaseMarseilles ngenkulungwane yeshumi elinesihlanu. Ke ngoko, namhlanje Tarot yaseMarseille iyaziwa njengeyona ndawo yakudala indala eyaziwayo ukuza kuthi ga ngoku.
Eli khadi lenziwe ngezinto ezininzi, nganye yezi mpawu kuxhomekeke kwindawo yekhadi kwaye kunye namanye amakhadi, zinika intsingiselo kumbuzo ofuna ukuwuphendula ngexesha lokufunda.
Yenziwe ngumsesane we-laurel obonisa isithsaba, umfazi ohamba ze udada embindini wesangqa kwaye ugqunywe kuphela ngumtya obomvu.
Kwizandla zozibini lo mfazi uphethe iibhatoni ezimbini, ngaphezulu kwesangqa se-laurel, lo mfazi ukunye nesithunywa sezulu kunye nokhozi.
Okwangoku, ngezantsi (nangaphandle kwendandatho) kusezinyaweni zakhe inkomo ngasekunene nengonyama ngasekhohlo.
Zombini ku Ihlabathi le-tarot de Marseille njengoMkhweli, zizinto ezifanayo. Kuphela kuMkhweli uya kufumana imizobo engaphezulu kuneMarseille.
Ngapha koko, ukuba ufuna ukwazi iTarot yaseMarseille, siyakumema ukuba ufunde inqaku elilandelayo esikunika lona: I-Tarot yaseMarseilles.
Limela ntoni ilizwe le-tarot?
Eli khadi lizele iisimboli, ezilungele ukuvumisa ngeenkwenkwezi kunye ne-kabbalistics, inxulunyaniswa nomqondiso weScorpio kunye neplanethi yeSaturn. Njengoko besenditshilo ngaphambili, inani layo lingama-21, into emele yona ngamanzi kwaye inxulumene nonobumba woonobumba besiHebhere "Shin".
Intsingiselo yeli khadi ilungile, nangona kunjalo, oku kuyakuxhomekeka kwisikhundla sakho. Emva koko siya kukufundisa ukutolikwa kwayo ngokwendawo yekhadi.
Ihlabathi limi nkqo
Kule ndawo, kuthetha ukuba ngumzuzu obalulekileyo kumntu owenzelwa ufundelo, oku kungenxa yokuba unxulumene nehlabathi elijikelezileyo.
Itolikwa njengexesha elilungileyo kwisibini esisecaleni lothando, lixesha lokuhlangana, apho banokuba ngabazali. Ingqikelelo yomtshato kwaye inokubonakalisa ukuqala kwendlu, kuba ii-singles ikwabonisa ikamva elihle.
Kule ndawo yobomi bomntu, kufanekisela iiprojekthi ezintsha eziza kuba neziqhamo, utshintsho lomsebenzi, ukuphela kwendlela embi okanye umzuzu wokuvuna iziqhamo zawo emva kwento ethathe iinzame ezininzi.
Kuthetha ukuba iziphumo zotyalo-mali oluthile oluza kwenziwa okanye esele lwenziwe, ziya kuba zilungile, ukuba uyakufumana imali elindelekileyo okanye ngandlela thile, enye yeendlela zakho zengeniso iya kuba yinzuzo kakhulu kuwe.
Umhlaba ngokubhekisele kwimpilo, utolikwa njengokonwabela ukomelela okukhulu namandla aqinisekileyo.
Uya kuvulelwa ekubeni wazi yonke into enento yokwenza nokufumana amandla aqinisekileyo, umphefumlo wakho kunye nomzimba wakho uya kuba kubudlelane nendalo ekungqongileyo.
Umhlaba ujonge phantsi
Ukutolikwa kwayo ngale ndlela, azikho izinto ezininzi ezintle onokuzithetha, ngokuchaseneyo, oku kutolikwa njengokungavisisani, ukunqongophala komgudu wokufezekisa iinjongo okanye amaxesha amabi ezayo.
Ingatolikwa njengomzuzwana wokwahlukana kwabantu abatshatileyo nabangatshatanga, ukungqubana okuninzi kubudlelwane bababini, nangona kunjalo, yonke into enokwenzeka kufuneka yenziwe ukufezekisa ubudlelwane kunye neqabane lakho.
Iya kuba lixesha lemiqobo yezimvo ezintsha, uya kuziva umile kwaye ngaphandle kwengqikelelo yokuqhubela phambili.
Imali egciniweyo kufuneka igcinwe, isetyenziswe ngononophelo kunye noxanduva. Eli ayiloxesha lililo lokwenza utyalomali olutsha.
Kuya kufuneka ulumke kuyo yonke into oyenzayo nendlela owukhathalela ngayo umzimba wakho, kuba xa ungakhathali awuyi kuba nakho ukonwabela impilo yakho.
Uya kuba nexesha elibi apho uziva ulinganiselwe kuwo onke amacala. Nangona kunjalo, ngesikhokelo esihle sokomoya ungazondla ngee-vibes ezilungileyo kwaye uphume kuyo yonke into ekoyikisayo.
Ngaba uyazi ukuba yintoni
Imvelaphi yetarot ayaziwa okanye ngubani oyiliweyo, kodwa into eyaziwayo kukuba indala kakhulu, yayisele isetyenziswa ngaphambi kukaKristu.
Ihlabathi leMarseilles tarot lelona lidala lirekhodiweyo ukuza kuthi ga ngoku.
Iimpawu ezibonakala kumakhadi asetyenziswe kwiMarseille tarot kunye noMkhweli ziyafana, kuphela kwiMarseille imizobo yabo ingaphezulu, ngelixa uMkhweli ebonakalisa ngakumbi.
Phakathi kwehlabathi leMarseille tarot kunye Umhlaba weTarot Rider abaqalayo bakhetha ukubuyela eTarot, kuba kulula ukutolika kwiisimboli.
Ihlabathi leJotorowsky tarot ineenkcazo eyahluke kancinane kuleyo yaseMarseille. Ewe, uMnu.Jodorowsky emva kokwenza ufundisiso nokutolika i-tarot wagqiba kwelokuba la makhadi anika kuphela iimpendulo kwimibuzo yexesha elidlulileyo okanye lomzuzu, nangona kunjalo, yayiliqhinga lokuba bawasebenzisela ukuqikelela ikamva.